I-Spocket: Yethula futhi Uhlanganise Ngokungenamthungo Ibhizinisi Elilahlayo Nge-Ecommerce Platform Yakho | Martech Zone
Njengomshicileli wokuqukethwe, ukuhlukanisa imali yakho engenayo kubaluleke kakhulu. Lapho besinemithombo yezindaba embalwa emikhulu emashumini ambalwa eminyaka edlule futhi ukukhangisa bekunenzuzo enkulu, namuhla sinezinkulungwane zemithombo yezindaba nabakhiqizi bokuqukethwe yonke indawo. Akungabazeki ukuthi ubonile abashicileli abasekelwe kwezokukhangisa kufanele behlise abasebenzi eminyakeni edlule… futhi labo abasaphila babheke kwezinye izindawo ukukhiqiza imali. Lokhu kungaba uxhaso, ukubhala izincwadi, ukwenza izinkulumo, ukwenza imihlangano yokucobelelana ngolwazi ekhokhelwayo, kanye nokuklama izifundo.
Ukusakaza okukodwa okunganakiwe kuqala isitolo se-inthanethi esinemikhiqizo efanele. Ukuba ne-podcast, isibonelo, eqalayo kungasekelwa ngezigqoko, izikibha, nokunye okuthengiswayo. Kodwa-ke, ukuphatha i-inventory, ukupakisha, nokuthunyelwa kuyikhanda elibuhlungu okungenzeka ukuthi awunaso isikhathi salo. Kulapho i-dropshipping iyisixazululo esiphelele.
Kuyini ukwehla futhi kusebenza kanjani?
Ikhasimende lifaka i-oda esitolo sakho futhi likukhokhele inani elingu-X. Umthengisi (wena) uzodinga ukuthenga lowo mkhiqizo ngenani elingu-Y kumphakeli, futhi bazothumela into ngqo ekhasimendeni lakho. Inzuzo yakho ilingana no-= X – Y. Imodeli ye-dropshipping ikuvumela ukuthi uvule isitolo se-inthanethi ngaphandle kokuthi uphathe noma yiluphi uhlobo lokusungula.
I-Spocket: Phequlula Imikhiqizo Ethengiswa Kakhulu Kubahlinzeki Abathembekile
Siye ezibhaliwe mayelana Kuyaphrinta, umphakeli we-dropshipping esikhathini esidlule, ohamba phambili emakethe. I-Printful inikeza ikhono lokwenza ngendlela oyifisayo nokushicilela izixazululo ezinophawu noma eziklanyelwe. Spocket yehlukile ngokuthi awunawo amandla okwenza uphawu noma okwenza ngendlela oyifisayo… indawo yemakethe yemikhiqizo eqinisekisiwe esevele idayisa kahle.
Spocket ihlukile ngoba akuyena nje umphakeli oyedwa… iqoqo lezinkulungwane zemikhiqizo edayiswa kakhulu ephuma kubahlinzeki abathembekile, abasezingeni eliphezulu. Banenhlanganisela yemikhiqizo evela e-USA, EU kanye nasemhlabeni jikelele, ngakho uzokwazi ukukhanga izimakethe eziningi - emhlabeni wonke.
Indawo yabo yemakethe ikuvumela ukuthi useshe futhi uhlele ngomthombo wokuthumela, isivinini sokuthumela, ukuthunyelwa kwemikhumbi okungabizi, i-inventory, intengo, ukuhlobana, kanye nesigaba:
Izigaba ezithrendayo zihlanganisa izingubo zabesifazane, ubucwebe namawashi, izimpahla zezilwane ezifuywayo, izinsiza zokugeza nobuhle, izesekeli zobuchwepheshe, impahla yasekhaya nengadi, izingane nempahla yezingane, amathoyizi, izicathulo, izesekeli zephathi, nokuningi. Izici zifaka:
Amasampuli: Oda khona kanye kudeshibhodi ngokuchofoza okumbalwa. Hlola kalula imikhiqizo nabahlinzeki ukuze wakhe ibhizinisi elithembekile le-dropshipping.
Fast-Shipping: Ama-90% abahlinzeki be-Spcoket atholakala e-US naseYurophu.
Yenza Inzuzo Enempilo: I-Spocket ikunikeza isaphulelo sika-30% - 60% kumanani okuthengisa avamile.
100% Ukucutshungulwa Kwe-oda Okuzenzakalelayo: Okufanele ukwenze ukuchofoza inkinobho yokuphuma, futhi banakekele okunye. Bacubungula ama-oda futhi bawathumele kumakhasimende akho.
Ama-invoyisi anebhrendi: Abahlinzeki abaningi ku-Spocket bakuvumela ukuthi wengeze ilogo yakho kanye nenothi elenziwe ngendlela oyifisayo ku-invoyisi yekhasimende lakho.
24 / 7 Ukusekela: Ungathumela umlayezo nganoma yisiphi isikhathi sosuku, futhi silungele ukuphendula imibuzo yakho.
I-Spocket futhi inomunye wemiphakathi emikhulu yama-dropshippers ongayifunda kusukela phambili Facebook!
I-Spocket inikeza ukuhlanganiswa okungenamthungo nge I-BigCommerce, Thenga, Felex, Wix, Ecwid, Squarespace, WooCommerce, Square, Alibaba, AliScraper, kanye nezitolo ze-KMO.
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene naye Spocket futhi ngisebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo kulesi sihloko.
Tags: AlibabaI-AliScraperI-BigCommerceukuhlanganiswa kwe-dropshippingisitolo esidonsa phansiabahlinzeki abalahla phansiI-EcwidIqembu le-FacebookFelexImaketheesitolo onlinethengaisikwelesquaeveraceabahlinzekiWixWooCommerce